Soo degso Alpha T-28 Trojan Set FSX & P3D - Rikoooo
downloads 10 744
T-28 qoriga waa diyaarad tababarka loo isticmaalo by Navy Maraykanka ka dib markii 1949. Waxaa ka dib waxaa la bedelay ka horjoogaha T-34. Diyaarad dalkan karaa side. (FS2004 version socon waa laga heli karaa halkan)
A cajiib ah add-on hooyo u ah FSX & P3D markii hore payware laakiin hadda bilaash ah! Waxay kujirtaa sagaal udgoon, VC oo leh cabbiraad caadooyin iyo moodooyin 4 ah. U isticmaal furaha barnaamijka T ee barnaamijka 'linhook'. Aqri aqriska howlaha kale.